Dowladda Soomaaliya oo bandhigtay sarkaal kasoo goostay Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wasaaradda Amniga Qaranka Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho kusoo bandhigtay nin ka tirsanaa Al-Shabaab oo isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya.
Maxamed Aadan Cabdiraxmaan oo ah sargaal Al- shabaab ka tirsanaa ayaa sheegay in isu soo dhiibistiisa ay gacan ka geysteen Waalidkiis, isagoo xusay in uu aad ugu faraxsanyahay sida uu uga soo goosta Shabaab.
“Waxaan ka tirsanaa Al-Shabaab, muddo ayaan la shaqeynayay, waxaana ka howgeli jiray Degmad Jilib, deegaankaygana waa Diinsoor, dowladda iyo Ummadda cafis ayaan weydiisanayaa, markii aan soo goosanayay fasax ayaan kaga faa’iideystay, oo aan go’aansanay in aan isaga soo tego” ayuu yiri Maxamed Aadan.
Aadan Cabdiraxmaan oo ah Aabaha Maxamed ayaa Warbaahinta ugu warbixyay sida ay dowladda Soomaaliya uu isku soo dhiibay wiilkiisa oo muda shan sano ka barbar dagaalamayay Al-Shabaab, waxa uuna baaq u diray waalidiinta kale inay carruurtooda kala soo baxaan Al-Shabaab.
“Farxad bay ii tahay in wiilkeyga uu iga aqbalay baaqeeygii ahaa in uu ka soo goosto Shabaab, runtii markii uu fasaxa ka soo qaatay kaddib waxaan fahamsiiyay in dhibaato ay kooxdaasi ku yihiin, wuuna iga qaatay, aadbaana ugu faraxsanahay” ayuu yiri Aabaha dhalay Maxamed.
Afhayeenka Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Cabdullaahi Muuse Keyse oo isna la hadlay Warbaahinta ayaa tilmaamay in tani ay qeyb ka tahay dadaalka ay dowladdu ugu jirto inay ku soo dhaweyso dhallinyarada kasoo goosanaya Shabaab.
Maxamed Yuusuf Cismaan Afhayeenka Wasaaradda Amniga Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in ninkan ka soo goostay Shabaab ay soo dhaweynayaan, maadaama waalidkii dhalay ay garteen in wiilkooda ay ka soo saaraan Shabaab, si uu u helo mustaqbal wanaagsan.
Ninkaan kazoo goostay Alshabaab ayaa la sheegay in dowladda Soomaaliya gudoonsiisay abaalmarin dhiiri gelin ah.
Alqaacidada Jazeeradda Carabta oo u tacsiyeeyey Alshabaab